1 Samueri 6 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rekutanga raSamueri 6:1-21
VaFiristiya vanodzorera Areka kuvaIsraeri (1-21)
6 Areka+ yaJehovha yakagara munyika yevaFiristiya kwemwedzi 7. 2 VaFiristiya vakashevedza vapristi nevanofembera+ vakavabvunza kuti: “Toitei neAreka yaJehovha? Tiudzei kuti tinofanira kuidzorera sei kunzvimbo yayo.” 3 Vakapindura kuti: “Kana mava kudzorera areka yesungano yaJehovha Mwari waIsraeri, musaidzorera musina mupiro. Munotofanira kuidzorera nemupiro wemhosva.+ Kana mukadaro, muchaporeswa uye muchaziva kuti nei ruoko rwake rwanga rusingabvi pamuri.” 4 Saka vakabvunza kuti: “Tomuendesera mupiro wemhosva wechii?” Ivo vakati: “Endesai zvimapundu* zvishanu zvakaumbwa negoridhe nembeva shanu dzegoridhe zvakaenzana nenhamba yemadzishe evaFiristiya,+ nekuti mese henyu nemadzishe enyu makabatwa nedenda rimwe chete. 5 Gadzirai zviumbwa zvemapundu enyu nezviumbwa zvembeva+ dziri kukuparadzirai nyika, uye kudzai Mwari waIsraeri. Zvichida angaita kuti ruoko rwake rusakutambudzai imi namwari wenyu nenyika yenyu.+ 6 Mungaomeserei mwoyo yenyu sekuomesa mwoyo kwakaitwa neIjipiti naFarao?+ Mwari paakavatambudza,+ vakarega vaIsraeri vachienda, ivo vakaenda havo.+ 7 Saka gadzirai ngoro itsva mutore mhou mbiri dziri kuyamwisa, dzisati dzambosungwa pajoko. Musunge mhou dzacho pangoro, asi mudzose mhuru dzadzo kumba, dzive kure nanamai vadzo. 8 Mutore Areka yaJehovha moiisa mungoro, uye isai zvinhu zvegoridhe zvamuchaendesa kwaari zvemupiro wemhosva mubhokisi, moriisa padivi peAreka.+ Muirege ichienda 9 muone zvichaitika: Kana ikakwidza nemugwagwa unoenda kuBheti-shemeshi,+ kunyika kwayo, ndiye akatiitira zvinhu izvi zvakaipa kwazvo. Asi ikasadaro, tichaziva kuti harusi ruoko rwake rwakatitambudza; zvakangoitikawo kwatiri.” 10 Varume vacho vakaita saizvozvo. Vakatora mhou mbiri dzakanga dzichiyamwisa, vakadzisunga pangoro, vakavharira mhuru dzacho kumba. 11 Vakabva vaisa Areka yaJehovha mungoro, pamwe chete nebhokisi raiva nembeva dzegoridhe nezviumbwa zvemapundu avo. 12 Mhou dzacho dzakati tande nemugwagwa wekuBheti-shemeshi.+ Dzakaramba dziri mumugwagwa mukuru iwoyo, dzichingokuma dzichienda; hadzina kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe. Munguva iyi yese madzishe evaFiristiya akanga achidzitevera kusvikira kumuganhu weBheti-shemeshi. 13 Vanhu vekuBheti-shemeshi vakanga vachicheka gorosi mubani. Pavakasimudza musoro vakaona Areka, vakafara chaizvo. 14 Ngoro yacho yakasvika mumunda waJoshua mugari wekuBheti-shemeshi, ikamira imomo pedyo nedombo guru. Vakabva vatsemura matanda engoro, vakabayira mhou+ dzacho sechibayiro chinopiswa kuna Jehovha. 15 VaRevhi+ vakaburutsa Areka yaJehovha nebhokisi rayaiva naro raiva nezvinhu zvegoridhe, uye vakazviisa padombo racho guru. Varume vekuBheti-shemeshi+ vakapa mipiro inopiswa, uye vakapa Jehovha zvibayiro zuva iroro. 16 Madzishe mashanu evaFiristiya paakazviona, akadzokera kuEkroni zuva iroro. 17 Aya ndiwo mapundu egoridhe akapiwa Jehovha+ nevaFiristiya kuti ave mupiro wemhosva: rimwe chete reAshdhodhi,+ rimwe chete reGaza, rimwe chete reAshkeroni, rimwe chete reGati,+ rimwe chete reEkroni.+ 18 Mbeva dzacho dzegoridhe dzaienderana nenhamba yemaguta ese evaFiristiya, emadzishe mashanu, kureva maguta akakomberedzwa nemasvingo pamwe chete nemisha yekumaruwa. Dombo guru ravakagadzika Areka yaJehovha riripo nanhasi sechapupu mumunda waJoshua, mugari wekuBheti-shemeshi. 19 Asi Mwari akauraya varume vekuBheti-shemeshi, nekuti vakanga vatarisa Areka yaJehovha. Akauraya varume 50 070* pavanhu vacho, uye vanhu vakatanga kuchema nekuti Jehovha akanga auraya vakawanda chaizvo.+ 20 Saka varume vekuBheti-shemeshi vakabvunza kuti: “Ndiani achakwanisa kumira pamberi paJehovha, Mwari uyu mutsvene?+ Haagoni kuendawo kune vamwe here?”+ 21 Saka vakazotuma nhume kuvagari vekuKiriyati-jearimu,+ vachiti: “VaFiristiya vadzosa Areka yaJehovha. Dzikai kuno muitore mukwidze nayo kwenyu.”+
^ Kureva zvimapundu zvakafanana nezvinomera kunobuda netsvina.
^ ChiHeb., “varume 70, varume 50 000.”